Donald Trump oo lagu casuumay in uu kasoo qeybgalo dhageysiga dacwadda loo heysto | Xaysimo
Home War Donald Trump oo lagu casuumay in uu kasoo qeybgalo dhageysiga dacwadda loo...
Donald Trump oo lagu casuumay in uu kasoo qeybgalo dhageysiga dacwadda loo heysto
Xildhibaanada aqalka Kongreska Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ku casuumay in uu kasoo qeybgalo dhageysiga dacwadda la doonayo in xilka lagaga qaado.
Trump ayaa 4-ta bisha Diseemabar lagu wargeliyay in uu horyimaado xildhibaanada aqalka kongreska ee dhageysanaya dacwadda loo heysto.
Jerrold Nadler, guddoomiyaha guddiga garsoorka ee qalka Kongreska ayaa sheegay in laba mid un ay noqon doontaa, oo kala ah in Madaxweynaha uu kaso qeybgalo dhageysiga dacwadda iyo ” in uu joojiyo ka sheegashada hannaanka”.
Haddii uu Madaxweyne Trump ka qeybgalo kulankaas, waxaa loo wareysan doonaa sida qof marqaati ah.
U yeerista madaxweyne Trump ayaa gogol xaar u ah tallaabada xigta ee qorshaha xil ka qaadista madaxaweyne Trump, kaasi oo ku saabsan wicitaankii dhanka taleefonka ee dhexmaray Madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Ukarine, Volodymyr Zelensky.
Wicitaankaas dhanka taleefonka ayaa madaxweyne Trump waxaa uu dhiggiisa Ukraine ka dalbaday in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Biden oo haatan kamid ah siyaasiyiinta u hanqal taagaya doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
Joe Biden iyo wiil uu dhalay ayaa horay uga soo shaqeeyay shirkadda gaaska ee dalka Ukraine.
Baaritaankan ayaa lagu ogaanaya in madaxweyne Trump uu taageerada milateri ee uu Mareykanka siiyo Ukraine u adeegsaday dano siyaasadeed, sii uu Ukarine cadaadis ugu saaro baaritaanka Biden, hasayeeshee madaxweyne Trump ayaa dhowr jeer ku celceliyay in uusan wax khalad ah gelin.
Toddobadkii hore, guddiga sirdoonka ee aqalka Kongreska ayaa soo gabagabeeyay dhageysiga dacwadda loo heysto Trump oo ay daawanayeen shacabka Mareykanka, waxaana kulamadaas lagu wareystay dhowr marqaati.
Guddiga ayaa sidoo kale kulamo ay albaabada u laaban yihiin la yeeshay marqaatiyaal wax ka ogaa eedeymaha loo heysto madaxweyne Trump.
Adam Schiff, guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in guddiga hogaaminaya baaritaanka oo ay kamid yihiin sirdoonka, xafiiska arrimaha dibadda iyo kor joogteynta ay haatan ka shaqeynayaan warbixinta, taas oo lasoo bandhigi doonaa 3-da bisha Disembar.
Muxuu Jerrold Nadler yiri?
Mr Nadler ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in uu Trump ku wargeliyay kasoo qeybgalka dhageysiga dacwadda loo heysto.
“Madaxweynaha isaga ikhtiyaar iskaleh, haddii uu rabo waxaa uu heytsaa fursad lagu matali kari ama uu isaga aaamusi karo ka sheegashada marwalba uu ka yahay hannaanka”.
Wuxuu intaa ku daray in dhageysiga ay tahay fursad lagaga wada hadli kara waxyaabaha dastuuriga ah ee lagu saleynayo xil ka qaadista.
Sidoo kale guddiga garsoorka ayaa la filayaa in ay bilaabaan qabya qoraalka qorshaha xil ka qaadista, kuwaas oo kala ah in Madaxweynaha uu galay khaladaad ka dhan ah dastuurka.